COVID-19: Ny Corona Pandemie sy ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
COVID-19: Ny Corona Pandemie sy ny haino aman-jery sosialy
Arakaraka ny fiovan'ny zavatra no hitovizany hatrany.
Zavatra tsara iray momba ny media sosialy: tsy mila manao sarontava ianao. Azonao atao ny mandefa na inona na inona amin'ny fotoana rehetra na amin'ny fotoana rehetra mitranga mandritra ireo fotoana voatondron'ny COVID-19 ireo. Ny areti-mifindra dia nahatonga ny faritra sasany hiditra ao anaty fifantohana maranitra, maranitra ny zorony boribory, manitatra ireo chasme, ary miaraka amin'izay koa, mampifandray ireo banga sasany.
Ireo mikotrana toa ny dokotera, ny mpamonjy voina, ary ireo mamelona ny mahantra dia manao izany amin'ny vavany misaron-tava. Ireo izay voa mafy amin'ny areti-mandringana ary tsy misy fanabeazana dia tsy mahita fomba hampiasa media sosialy hamelana an'izao tontolo izao handre ny fitarainan'ny hanoanana. Ny fatin-tsakafo tsara dia mizara resipeo ary mampiasa media sosialy hanehoana ny fomba fandaniany ny fotoana.
Inona no ataon'ny haino aman-jery sosialy amin'ny valanaretina?
Facebook voalaza nanome facemasks 720,000 ary nampanantena ny hanome sy hanome bebe kokoa. Nanome toky izy fa hanome 145 tapitrisa dolara ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy orinasa kely.
WhatsApp namorona a Toeram-baovao Coronavirus ary namela ny WHO handefa chatbot hampitandrina ny olona momba ny loza mety hitranga amin'ny coronavirus. Izany dia voalaza fa nanome vola $ 1 tapitrisa ny Tambajotra iraisam-pirenena manamarina ny zava-misy ao amin'ny Poynter Institute hanohanana ny firaisan-kinan'ny zava-misy momba ny coronavirus izay hita ao amin'ny firenena 45 amin'ny alàlan'ny fikambanana 100 eo an-toerana. Misy Fiakarana 40% amin'ny Whatsapp fampiasana.
Mila deraina ny Instagram mandray fepetra hisorohana ny fielezana ny fampahalalana diso.
Twitter nitombo ny mpampiasa isa eo amin'ny 23% eo ho eo ao anatin'ny telo volana voalohany amin'ny 2020 ary mandrara ireo bitsika izay mety hisy fiatraikany amin'ny fihanaky ny coronavirus ny sehatra. Twitter dia manome $ 1 tapitrisa ho an'ny Komity hiarovana ny mpanao gazety ary ny International Foundation Media Foundation.
LinkedIn nanokatra fampianarana 16 azon'ireo mpampiasa idirana maimaimpoana ary mamoaka toro-hevitra momba ny asa aman-draharaha momba ny zavatra tokony hapetrany izy ireo mandritra ny areti-mandringana.
Netflix mampanantena atiny vaovao hitazomana ny olona mandritra ny fanidiana mihidy.
Youtube dia manao izay saim-pantany fameranag doka mifandraika mankany Coronavirus.
Sprinklr antontan'isa voaangona izay mampiseho ny fehezanteny mifandraika COVID-19 sy coronavirus dia voalaza in-20 tapitrisa mahery tao amin'ny media sosialy, vaovao ary tranokala TV.
Mitohy ny lisitra Snapchat, Pinterest, ary ny fantsona media sosialy hafa mifamaly. Izay no mahasoa fa ahoana no ampiasan'ny olona ny media sosialy mandritra ny areti-mandringana?
Ny mahatsara ny haino aman-jery sosialy
Mila mijanona an-trano an-tery ny olona ary izany dia mitarika fandaniana fotoana bebe kokoa amin'ny media sosialy. 80% ny olona mihinana atiny maro kokoa ary 68% ny mpampiasa mitady atiny mifandraika amin'ny areti-mandringana. Soa ihany fa tsy ny olona mandalo fotoana fotsiny.
Olom-pirenena vitsivitsy be fanahiana no namorona tranonkala sosialy izay anolorany sy hizaran'izy ireo sakafo mahandro an-trano ho an'ny sahirana ankoatra ny fanondroana toerana fialofana sy fitsaboana voalohany amin'ireo sahirana ao an-tanànany. Ohatra, vondron'olona monina any Mumbai no nanomboka nampiasa ny fananan'izy ireo handrahoana sakafo sy hizara izany ho an'ireo sahirana. Nanjary lasa fanampiana sy tranokala misy olona maro hanatevin-daharana ilay hetsika manerana ny tanàna hafa izy io.
K Ganesh an'ny Big Basket, Juggy Marwaha ao amin'ny JLL, ary Venkat Narayana avy amin'ny Prestige Group dia nanomboka ny fanombohana FeedmyBangalore mba hanampiana ireo sahirana ara-toekarena mandritra ity areti-mandringana Covid19 ity. Hanome sakafo ho an'ny ankizy sahirana 3000 sy ny fianakaviany izy ireo mandritra ny Fondation Humanita Parikrma. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanolotra sakafo 3 lakh mandritra ny fanidiana.
Ny ONG dia manao izay vitany mba hanomezana sakafo, mpanadio, fitaovam-pivarotana enta-mavesatra ary saron-tava mandritra izao fanidiana areti-mandringana izao.
Mamindra amin'ny alàlan'ny torohevitra tsy azo antoka momba ny fomba azo antoka sy arovana ireo olo-malaza. Heverina fa mazoto mandray torohevitra ny olona rehefa avy amin'ny olo-malaza.
Na izany aza, misy lafy ratsy ihany koa.
Ny ratsy amin'ny media sosialy
Rehefa misy hanoanana miely ary mosarena ny olona dia misy olo-malaza manararaotra ny media sosialy mba hampisehoana ireo fomba fahandro hafakely izay omanin'izy ireo ho fomba iray handaniana fotoana.
Tsy tany Inde ihany fa manerana an'izao tontolo izao, indrindra any Etazonia sy any Eropa, ny silamo dia eo am-pamaranana lahatsoratra fankahalana manameloka ny vondrom-piarahamonina iray manontolo noho ny valanaretina. Vaovao sy horonan-tsary sandoka, ary koa lahatsoratra mandrisika, no mirongatra, izay zavatra mampalahelo.
Ny antoko politika dia manandrana manamboatra ahitra raha miposaka ny Masoandro COVID. Afaka naneho fahatsapana bebe kokoa izy ireo fa tsy fanaovana politika ny viriosy.
Toy ny mahazatra dia manararaotra ny haino aman-jery sosialy ny tsy mahay mandanjalanja mba hanosehana ireo fanafody mampidi-doza mety hampidi-doza noho ny COVID-19. Ny sasany maniry ny hanao varotra an'io fotoana io. Ny sasany manolotra torohevitra na vaovao mety hamitaka toy ny: Minia mikasa ny hamindra an'izao tontolo izao ny sinoa ary handray an-tanana…, Sitrano ny rano sy ny gargle handro ny viriosy…, Mihinana tongolo gasy manta…, Mampiasà urine sy tain'omby…, Jiro sy labozia ary mandoro emboka manitra hialana amin'ny corona… Tsy azon'ny ankizy izany… sy ny sisa. Avy eo misy olona manolotra fampiharana fanaraha-maso corona izay misy malware.
Ny lohan'ny kominisma ratsy tarehy dia mahita tany mahavokatra ao amin'ny media sosialy ary mety hijanona maharitra ny fifanenjanana lava aorian'ny fanjavonan'ny coronavirus na ny fialany.
Marketing miaraka amin'ny Humane Touch
Ny hatsaran'ny media sosialy dia ny ahafahanao mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny marikao sy ny lazanao ary azonao ampiasaina amin'ny fifanakalozana ara-tsosialy. Ny varotra androany dia nanova ny toerany kely hanampiana patina maha-olombelona amin'ny asany.
Mampiasa media sosialy izao ny orinasa hanehoana ny fiahiany ny mpanjifa ary hiezaka hanampy amin'ny fomba rehetra azony atao fa tsy fanampiana mifandraika amin'ny vokatra fotsiny. Fotoana hananganana fifampitokisana, hanamafisana ny fahatokisan-tena ary hikolokoloana ny fifandraisana. Manao izany ny orinasa mikarakara. Mahazoa fankasitrahana anio. Hadika amin'ny fidiram-bola io avy eo satria mahatadidy ny olona.
Ireo mpivarotra dizitaly dia nampiasa teny lakile mahitsy nesorina tamin'ny fikarohana. Ankehitriny izy ireo dia tsy maintsy mandinika teny fanalahidy indray miaraka amin'ny fanamafisana ny teny mifandraika amin'ny COVID-19 mba hamoronana fiantraikany hafa sy hilaza amin'ny kendrena. Tokony ho ao an-tsaina koa ny fahitan'i Brandwatch fa ny fihetseham-po manodidina ny lahatsoratra mifandray amin'ny virus corona dia ratsy indrindra.
Zavatra iray manamarika ny vokarin'ny valanaretina amin'ny media sosialy dia ny Youtube, Facebook, ary Twitter izay miasa mba hamongorana ny vaovao sy hamongorana ireo lahatsoratra misy poizina
Amin'ny fomba fijery misimisy kokoa dia afaka milaza ny olona mampiasa media sosialy hanao tsara fa hanao izany ireo izay mirona hampiasa haino aman-jery sosialy hiasa ratsy. Ny areti-mifindra dia nanova zavatra kely amin'ny tambajotra sosialy saingy, araka ny filazan'izy ireo, arakaraky ny fiovan'ny zavatra no vao mijanona ho iray ihany. Ho fantatsika, enim-bolana manomboka izao.
Tags: Covid-19zava-fanamarinanaJuggy MarwahaK GaneshNetflixareti-mifindravondrona manaja lazahaino aman-jery sosialy ratsytsara ny media sosialyTwitterWhatsAppYouTube
Inona ny CRM B2C tsara indrindra ho an'ny orinasanao madinidinika?
Ahoana ny fomba hahitana endri-tsoratra amin'ny Adobe Capture